Michy Batshuayi oo la xaqiijiyay inuu tijaabada caafimaad u maray kooxda Chelsea – Gool FM
Michy Batshuayi oo la xaqiijiyay inuu tijaabada caafimaad u maray kooxda Chelsea
Byare June 29, 2016
(France) 29 Juunyo 2016. Tababaraha xulka Belgium Marc Wilmots ayaa xaqiijiyay in Michy Batshuayi uu maray tijaabada caafimaad xilli uu ku sii jeedo kooxda Chelsea.
22-jirkan ka ciyaara weerarka ayaa la filayay markii hore inuu ku biirayo kooxda Crystal Palace kaddib markii ay kooxda Marseille aqabashay dalab 31.6-milyan oo bound, laakiin wuu iska diiday inuu u dhaqaaqo kooxda lagu naaneyso Eagles.
Batshuayi ayaa qeyb ka ah iminka xulka Belgium ee Euro 2016 wuxuuna xaqiijiyay tababare Marc Wilmots inuu ka fasaxay xerada tababarka si uu u maro tijaabada caafimaad.
“Waxaan u maleynayaa inay aad u fiican tahay in ciyaartoydu ku mashquulsan tahay suuqa kala iibsiga,” Tababaraha xulka Belgium ayaa sidaa yiri.
“Waxay tani ku tusineysaa inay si adag u shaqeeyeen, shalay waxay qaateen galab fasax ah qaar ka mid ah xiddigaha waxay uga faa’iideysteen fursada arrimaha ku aadan suuqa kala iibsiga. Way fiican tahay in la xaliyo dhibaatooyinkan.
“Ima uusan waydiisan isaga waano ku aadan dhaqaaqistiisa. Laakiin naadiga Marseille ayaa i waydiisatay inaan u fasaxo Batshuayi labo saacadood oo booqasho tijaabo caafimaad ah. Waana intaa”.
FAALLO: Muxuu Talyaanigu uga tayo fiican yahay Ingiriiska? - Waxaa ka jawaabaya laacib Ingiriiska u dhashay, Talyaanigana kasoo dheeley (Qaybtii 1-aad)
WARBIXIN: Yay Barcelona ku marti qaaday sanadkan koobkeeda Gamper Cup, Maxaysa tahay sirta ka dambeysa ee koobkan loo qabto?